Rija Rakotomalala sy ny fanangonana : fialamboly manjary vakoka ho an’ny Malagasy rehetra – Blaogin'i Voniary
Rija Rakotomalala sy ny fanangonana : fialamboly manjary vakoka ho an’ny Malagasy rehetra
Boky an’arivony, baiboly an-jatony amin’ny teny Malagasy sy fiteny hafa, vola Malagasy sy an’ny firenen-kafa, gazetiboky, hajia sy karazan-javatra maro samihafa no asehon-dRAKOTOMALALA Rivoniaina Rija ao amin’ny Tahala Rarihasina Analakely nanomboka tamin’ny 18 Martsa ka hatramin’ny 28 Martsa ho avy izao. Efa fanaony isan-taona ny fampirantiana toy izao ary andiany fahafolo ity tanterahina ity. Fialamboliny ny manangona ary satriny zaraina izany mba hahasoa ny besinimaro.
« Matoa ny tena manao zavatra toy izao dia te-ho tonga amin’ny tsaratsara kokoa sy ambonimbony kokoa amin’io sehatra io ! »
hoy i Rija Rakotomalala
Tanjony manko ny hanangana tranom-bakoka any aoriana any. Efa ho 33 taona izao no nanangonany karazan-javatra maro samihafa. Fialamboly sady fampitomboana fahalalana no ankafizany manao izany. Tiany ihany koa ny maneho ireo vakokany ireo satria fantany fa betsaka ny olona liana. Voaporofo izany mandritra ny fampirantiana izay ahitana mpitsidika eo amin’ny zato isan’andro eo. Tsy vitan’izany fa efa folo taona izao no nanatanterahany hetsika toy izao ary mirohotra hatrany ny olona. Maro mihitsy ny maneho hetaheta indrindra ny amin’ny mba hahafahanana mamaky ireo boky sy mamadibadika ireo rakitry ny ela amin’ny fotoana rehetra.
Inona avy no hita ao ?
Baiboly Malagasy amin’ny endriny maro no hita ao toy ny baiboly an-tsary ho an’ny ankizy sy ny baiboly ampiasain’ny antokom-pinoana samihafa. Ao koa ireo baiboly amin’ny fiteny maro eran’izao tontolo izao toy ny hebrio, kiswahili, urdu, esperanto, nepalezy, persa sy ny maro hafa. Raha ny hajia indray dia santionany fotsiny no aranty ao, dia ireo maneho olomanga sy olo-malaza Malagasy. Fanampin’izany, tsikaritra ao koa ireo vola nifandimby teto Madagasikara ny vola vy sy ny vola taratasy. Tsy adino ireo vola vahiny isan-karazany sy ireo karatra fiantso avy eto an-toerana sy avy any ivelany ary koa sariny miaraka amin’olo-malaza izay mameno ny rindrin’ny efitra maro .
Baiboly amin’ny fiteny maro samihafa
cc : Voniary
Fialamboly hafakely tokoa satria hatramin’ny kasikety aza mameno rindrina iray. Ary misy lanjany amin’i Rija Rakotomalala ireo satria kasikety mitondra ny sary famantarana BMW avokoa, anamarihany ny fankafizany manokana io karazana fiara vita avy any alemana io. Manampy izany ireo pitson-javatra isan-karazany misy ilay sary famantarana toy ny penina sy ny haingom-panalahidy ary koa ny fiara bitika.
Amin’ny maha-mpanoratra ny lehilahy dia manan-danja aminy koa ny boky. Boky Malagasy maro no voaangony toy ny tantara foronina, sombin-tantara, amboran-tononkalo, kabary, boky fianarana sy ny sisa. Mahazo toerana manokana koa ireo boky politika sy haitarika ary haitantana. Arantiny ao ihany koa ny gazetiboky avy eto an-toerana na avy any ivelany.
« Angoniko avokoa na ireo gazetiboky rehetra na ireo vidim-bola na ireo zaraina maimaim-poana satria azo anovozam-pahalalana avokoa ireny. Diso ireo mihevitra hoe matoa maimaim-poana dia tsy misy azo raisina izay ao anatiny. »
Hoy ny fanazavan’ity mpanangona.
Ny nanaitra ahy indrindra
Mitahiry rakitry ny ela maro isan-karazany ihany koa Rakotomalala Rivoniaina Rija. Mahavita manangona tahirin-gazety manokana ho an’olomanga sy olo-malaza iray mihitsy izy rehefa mahaliana azy izany, ao ohatra ny tahiry mikasika an-dRado, ilay poetan’ny fahafahana, i Bodo sy Samoela, izay mpanakanto ankafiziny.
Ny ahy manokana dia ilay tahiry momba an-dRatsimandrava no nanaitra ahy tao : tapa-gazety sy boky maro. Voarakitra ao manontolo ny momba ilay filoham-pirenena Malagasy sahy nijoro hanarina ny Tanindrazana nefa nalavon’ny fahavalom-pirenena.
Tsy ampy tokoa ny folo androm-pampirantiana raha hamadibadihana sy handinihana ireo vakoka voaangon’i Rija Rakotomalala. Izaho aloha dia anisan’ireo izay maniry ny hisian’ny tranom-bakoka hanehoana ireo mandritra ny fotoana tsy voafetra mba hotsidihin’ny Malagasy rehetra, na ankehitriny na any aoriana any. Maha-te-hidera ny fananana finiavana izara fahalalana amin’ny besinimaro tahaka izao. Mahasoa tokoa ny fialamboly raha tanterahina am-pitiavana, hombana tanjona tsara ary arahina fahafoizana toy izao. Maromaroa anie ny tahaka azy !
Izany ka Malagasy, Resadresaka
baiboly Malagasy, boky Malagasy, fampirantiana, fanangonana, rija rakotomalala, tahala rarihasina, vakoka
The Red Shalk : hetsika miavaka ampiroboroboana ny fandraharahana